कत्तिको सुरक्षित, गोपनीय र भरपर्दो छ नागरिक एप ? -
प्रकाशित मिति : २०७७, ३ माघ शनिबार
संभव भएसम्मका सबै सरकारी सेवा लिन सकिने गरी सरकारले शुक्रबार परीक्षणको रुपमा नागरिक सार्वजनिक गरेको थियो । छोटो समयमै उल्लेख्य रुपमा प्रयोगकर्ताको आकर्षण देखिएको यो एप वास्तवमा कत्तिको सुरक्षित र गोपनीय छ त ?
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको एप निर्माण टोलीले एप उपयोगिता र सहजतासँगै सुरक्षित र गोपनीयता मैत्री समेत बनाइएको बताएको छ । यो एपमा अकाउन्ट बनाउन आफ्नै नाममा दर्ता भएको मोबाइल नम्बर चाहिन्छ ।
अर्थात अरु कसैको नाममा रहेको सिम तपाईंले वा तपाईंको सिम अरु कसैले प्रयोग गरी यो एप प्रयोग गर्न पाउँदैन । फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ट्वीटर जस्ता एपमा जस्तै यसमा पनि सुरक्षाका लागि टु फ्याक्टर अथेन्टिकेसन राखिएको छ ।
साथमा रहेको मोबाइलमा प्राप्त ओटीपी कोड राखेपछि मात्र यो एप खोल्न सकिन्छ । यसको अर्थ अरु कसैले तपाईंको मोबाइल नम्बर र पिन कोड थाहा पाएको खण्डमा समेत नागरिक एपमा पहुँच बनाउन सक्दैन ।
अर्थात तपाईंकै नम्बरमा आएको ओटीपी कोड नराखी यो एपमा लगईन गर्न सम्भव हुँदैन । जसले गर्दा अरुले तपाईंको नामबाट नागरिक एप खोल्न सक्दैन ।
नागरिक एपले तपाईंसँग तपाईंको आफ्नै नाममा रहेको सिमकार्ड छ कि छैन भन्ने कुराको यकिन गर्छ । यसका लागि ओटीपी भेरिफिकेसन गरिसकेपछि नागरिक एपमा रहेका सेवामा पहुँच बनाउन नागरिकता, मतदाता परिचयपत्र र पासपोर्ट जस्ता कागजातबाट आफूलाई पुष्टी समेत गराउनुपर्छ ।
सरकारसँग भएका नागरिकका सबै डिजिटल विवरणहरु सिंहदरबारभित्र रहेको राष्ट्रिय सूचना प्रविधि कन्द्रको डेटा सेन्टरमा राखिएका छन् । जहाँ तहगत सुरक्षा प्रबन्ध मिलाइएको केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक सुनिल पौडेल बताउँछन् ।
तीन वटा पक्षबाट स्वतन्त्र रुपमा नागरिक एपको सुरक्षा परीक्षण गराइएको छ । एप निर्माण टोलीको दाबी अनुसार नेपालमा अहिलेसम्म सबैभन्दा धेरै सेक्युरिटी टेस्टिङ गराइएको सरकारी एप पनि यही नै हो ।
एपमा सुरक्षाका लागि थर्डपार्टी इन्क्रिप्सन प्रविधि प्रयोग गरिएको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र तयार भइसकेपछि यसमा बायोमेट्रिक सुरक्षा प्रणाली समेत थपिने उल्लेख छ ।
सरकारी निकायमा भएका नागरिकका विवरण यो एपमा रहने भने होइन । यसले विभिन्न सरकारी निकायमा रहेका नागरिकका यस किसिमका विवरणलाई एकआपसमा जोडेर रियल टाइम काम गर्दछ ।